﻿ कसरी थाहा पाउने एचआईभी भएको ?
कसरी थाहा पाउने एचआईभी भएको ?
एचआईभी र एड्स एउटा गम्भिर रोग हो । कति विकासशील र अविकसित देशको लागि एचआईभी ठूलो समस्याको रुपमा देखा परेको छ ।
अविकसित देश मात्र होइन विकसित देशमा यस रोगबाट धेरैको मृत्यु भएको पाइन्छ । असुरक्षित यौन सम्पर्क, एचआईभी संक्रमित रगत, एचआईभी संक्रमित आमाले जन्माएको बच्चा र प्रयोग गरिएका सुई (इन्जेक्सन)बाट यो रोग सर्ने गर्छ ।
जान्नुहोस् यसका लक्षणहरुः
सामान्यतया ज्वरो आउनु एक आम समस्या हो । तर यो बिमारी लामो समयसम्म रह्यो भने एचआईभी लागेको प्रारम्भिक लक्षण हुन सक्छ । यदि तपाईलाई लामो समयसम्म ज्वरो आइरहेको छ भने तुरुन्त चिकित्सकसँग परामर्श गरेर रगत परीक्षण गराउनुहोस् ।
एचआईभी पीडित व्यक्तिमा मांसपेशी दुख्ने समस्या हुन्छ । यदि तपाईमा पनि लगातार मांसपेशी दुख्ने समस्या छ भने सावधान रहनुहोस्, कतै एचआईभी त लागेको छैन ?
शरीर चिलाउनु तथा छालामा दाग देखिनु
भनिन्छ कि तपाईको छालाले नै शरीरको बारेमा सबै थोक बताउँछ । यो कुरामा धेरै हदसम्म सत्यता पनि छ । एचआईभी संक्रमण हुँदा पनि छालाले चेतावनी दिन्छ । यदि छाला चिलाउने तथा दाग र धब्बा देखिने समस्या छ भने यो एचआईभीको लक्षण पनि हुन सक्छ ।
यो रोगबाट संक्रमित व्यक्तिलाई रातको समयमा सधैँ पसीना आउने, बेचैनी हुने हुन्छ भने निन्द्रा नलाग्ने समस्याले सताउँछ ।
राम्रो स्वास्थ्यका लागि मर्निङ वाक गर्न सुझाव
यस्ता छन् केसर हालेको दूध पिउँनुका फाइदा